IELTS ဖြေရင် ဘာတွေသတိပြုမလဲ
ဖြေဆိုသူ များပြားတဲ့ နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ IELTS (International English Language Testing System) ကို ဖြေဆိုတဲ့အခါ သတိပြုရမှာတွေကို အပိုင်းလေးပိုင်းစလုံး အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
* အမှတ်ကောင်းကောင်းရဖို့ အတွက် ဝေါဟာရ စကားလုံး ကြွယ်ဝဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ စာတစ်ကြောင်းနဲ့ တစ်ကြောင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်တူ စကားလုံးတွေ များများသုံးပေးနိုင်ရင် အမှတ်ပိုများနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို့သူတွေက ဒါကိုနားလည်မှုလွဲပြီး ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ စကားပြောရာမှာ သိပ်မသုံးတဲ့ စကားလုံး အသစ်အဆန်းတွေကို Writing မှာ ထည့်သုံးတတ်ကြတာက အမှတ်ကို ပိုလျော့စေပါတယ်။
Writing မှာ ဒီလိုစကားလုံးသစ်တွေ တီထွင်သုံးရင် စာအရေးအသားမှာ အမှားတွေ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်း အလွဲကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ သဒ္ဒါအထားအသိုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမှားပိုများနိုင်လို့ စကားလုံးအသစ်တွေ အပေါ်မှာ လိုတာထက်ပို အာရုံမရောက်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
* သဒ္ဒါအမှားကလည်း အမှတ်လျော့စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာထဲမှာ ပါပါတယ်။ သဒ္ဒါအသုံးအနှုန်း နည်းနည်းလေးမှားရုံနဲ့ ၆.၀ ကျော်ရဖို့ ခက်သွားစေတာ ကြိုသိထားသင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သဒ္ဒါအသုံးအနှုန်းကို ဂရုစိုက်ပါ။ Task 1 မှာ သဒ္ဒါမှားနှုန်း နည်းနိုင်ပေမယ့် Task2စာပုဒ်အရှည်ကြီးမှာ သဒ္ဒါမှားနိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ သဒ္ဒါအထားအသိုနဲ့ပဲ ဖြေဆိုပါ။
* စကားဆက်သုံးတာ သတိထားပါ။ စာကြောင်းလှအောင် စကားဆက်တွေ အလွန်အကျွံ သုံးတာက လွဲသွားရင် အမှတ်မရတဲ့အပြင် အမှတ်လျော့တတ်ပါတယ်။
စာကြောင်းကို လိုတာထက် မရှည်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြတ်သင့်တဲ့နေရာမှာ စာကြောင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြတ်ထားပါ။ ပြီးရင် စာကြောင်းအသစ် ပြန်စရေးပါ။ ဒါဆို စကားဆက်နေရာမှာ အမှားနည်းပါလိမ့်မယ်။
* စာများများဖတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာမဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာတွေက ဆောင်းပါးတွေကို များများဖတ်ပြီး လေ့ကျင့်ထားပါ။
* Reading ဖြေတဲ့နေရာမှာ တစ်ပုဒ်လုံးကို အေးဆေးဖတ်ဖို့ အချိန်မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆိုလိုတဲ့ သဘောတရား နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီးဖတ်ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံးတွေကို မျဉ်းတားထားပါ။
* IELTS မေးခွန်းတွေမှာ Reading နဲ့ Writing က အချိန်မလုံလောက်တဲ့ ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Reading ဖြေတဲ့နေရာမှာ မေးခွန်းတစ်ပုဒ်စီကို အချိန်ဘယ်လောက်ယူမယ် ဆိုတာ ကြိုတွက်ထားမှ တော်ရုံကျနိုင်မှာပါ။
* ကိုယ်မဖြေနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေဆို စဉ်းစားမနေပါနဲ့။ ကျော်သွားလိုက်ပါ။ အားလုံးဖြေပြီးတော့မှ မေးခွန်းပြန်ဖတ်ပြီး ဖြေပါ။ အဲဒီလို ဖြေဆိုဖို့လည်း သီးသန့်အချိန်ထားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
* Reading မေးခွန်းပုံစံက ၈ မျိုးလောက် ရှိပါတယ်။ စာမေးပွဲမဖြေခင် အဲ့ဒီပုံစံ အားလုံးကို ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားပါ။
* သတိပြုဖို့က Reading test မှာ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်ကျဖို့နဲ့ မေးခွန်းပုံစံ နားလည်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ။
* စကားပြောတဲ့နေရာမှာ စာရေးသလိုပဲ အစ-အလယ်-အဆုံး အားလုံးပြည့်စုံဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် IELTS Speaking မှာ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အဆုံးသတ်ပေးပါ။ ဒါမှ Score 6.5 နဲ့ အထက် ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
* ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သာမန် Score 5.0 လောက်ပဲ ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပါယ်တူ ဝေါဟာရတွေပဲ ထည့်ပြောသွားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၆.၀ အထက် မှန်းထားတယ် ဆိုရင်တော့ ဝေါဟာရများများ လေ့လာထားပါ။
* ကိုယ့်ရဲ့အသံထွက်ကို စိတ်မပူပါနဲ့။ စကားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အသံထွက် ပီသအောင်သာ ပြောပါ။ အရေးကြီးတာက စကားမြန်မြန်ပြောတတ်တဲ့သူတွေ Speaking ဖြေတဲ့ နေရာမှာ ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ်ပြောတဲ့စကား မသဲကွဲရင် ကိုယ်ပဲ အမှတ်လျှော့ ခံရမှာပါ။
* တစ်ခါတစ်လေကျရင် Examiner မေးတဲ့ မေးခွန်းကို တစ်ခါတည်း နားလည်ဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုမျိုး အချိန်မှာ “Pardon” လို့ မမေးဘဲ “Can you please repeat the question” လို့ မေးတာက ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။
* Speaking ဖြေတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်အတိတ်အကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆို “used to” အသုံးနှုန်းလေး သုံးစေချင်ပါတယ်။
* အရေးကြီးဆုံး နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ပြောနေတဲ့ Topic ထဲကနေ Examiner ကို မေးခွန်းပြန်မေးဖို့ မလုပ်မိပါစေနဲ့။
* Speaking test ပြီးသွားတဲ့ အချိန်ကျရင် Examiner ကို “bye-bye” “thank you for your time” “nice meeting you” “I hope to see you again” လို့ မပြောမိပါစေနဲ့။ ဒီအတိုင်းပဲ ထွက်လာခဲ့ပါ။
* တချို့မေးခွန်းတွေမှာ ကိုယ်က လိမ်ညာပြီး ဖြေတာဖြစ်ဖြစ် အမှန်ကို အနည်းငယ် လွဲဖြေတာဖြစ်ဖြစ် ဖြေလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို အမှန်အတိုင်း ဖြေရမယ်လို့ မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အမှန်တကယ် ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ လိမ်ညာပြောတာ၊ အလွန်တရာ ချဲ့ကားပြီးပြောတာ မဖြစ်ဖို့ သတိထားပေးပါ။
* ဖြေဆိုသူက မေးနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာ (Topic) နဲ့ မေးခွန်းပုံစံကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးထားရပါမယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ပြောတဲ့စကားလဲ၊ ဘာအကြောင်း ပြောတာလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ရင် ဖြေရတာလည်း အတန်ငယ် လွယ်ကူပါတယ်။ နာမည်တွေ၊ လိပ်စာတွေနဲ့ နံပါတ်တွေကို အကြမ်းချရေးပြီး မှတ်ထားပါ။
* မေးခွန်းတစ်ခု ဖြေပြီးလို့ နောက်ထပ်မေးခွန်း မစခင်မှာ အချိန်တစ်မိနစ် ရပါတယ်။ စက္ကန့် ၃၀ က မေးခွန်းဟောင်းက အဖြေအတွက် ဖြစ်ပြီး ကျန်စက္ကန့် ၃၀ ကတော့ လာမယ့် မေးခွန်းအတွက် ကြိုတင်စဉ်းစားဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖြေဆိုသူက မေးခွန်းဟောင်းအတွက် အဲ့ဒီအချိန်သုံးမယ့်အစား မေးခွန်းသစ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
* Listening မှာ တစ်ခါတစ်လေ အထက်အောက် မေးခွန်းနှစ်ခုက ဆက်စပ်မေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေးခွန်းနှစ်ခုကို တပြိုင်တည်း ကြည့်တတ်ဖို့လည်း လေ့ကျင့်ထားပါ။
* မေးခွန်းတစ်ခု ကိုယ်မကြားမိလို့၊ နားမလည်လို့ဆိုရင် ကျော်သွားပါ။ အချိန်ကုန်ခံ မစဉ်းစားပါနဲ့။ အချောချရေးတဲ့ အချိန်မှ စဉ်းစားပြီး ခန့်မှန်းခြေကို ထည့်ရေးလိုက်ပါ။ အဖြေနေရာ အလွတ်မထားခဲ့ပါနဲ့။
* Listening ဖြေဆိုတဲ့အခါ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနဲ့ သဒ္ဒါမှန်ကန်အောင် ဖြေပါ။ အဖြေကို သိပေမယ့် စာလုံးပေါင်းလွဲရင် အမှတ်မရရှိနိုင်ပါဘူး။
Ref: www.hubpages.com. www.dcielts.com. www.ieltsbuddy.com. နိုင်ငံတကာ IELTS ဆရာများရဲ့ သင်ကြားပို့ချချက်များမှ ကောက်နှုတ်ချက်အချို့